ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “မျိုးချစ်မြန်မာများနှင့် ဗလောင်းဗလဲ စင်္ကာပူ”
မတရားမှုကို ခေါင်းငုံ့ လည်စင်းပေးရိုးထုံးစံမရှိ
စင်္ကာပူက ရဲရဲတောက် မျိုးချစ်မြန်မာ များကို လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဘယ်လိုအခက်အခဲ တွေ အတားအဆီးတွေ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ နဲ့ပဲ ရင်ဆိုင်ရင်ဆိုင် မကြောက်မရွံ့ နောက်မဆုတ်ပဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်လို့ ကြားရတဲ့အတွက် ပိုပြီး လေးစားမိပါတယ်။ အညံ့ခံ အရှုံးပေးသွားတဲ့ လူတွေအတွက်တော့ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ သူတို့လည်း သူတို့အကြောင်းနဲ့ သူတို့ မို့လို့ ဘာမှ တော့ မပြောနေတော့ပါဘူး။
အခုတစ်လော စင်္ကာပူက မြန်မာအများကြားမှာ လည်း ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သဘောထား တော်တော်များများကွဲနေကြတယ် သူတို့ရဲ့ ပို့စ်တွေနဲ့ comment တွေကို ဖတ်ရင်အထင်းသားသိနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်ထင်တယ် ခုတစ်လော စလုံးအစိုးရက မြန်မာတွေအားလုံးကို တော်တော်လေး တင်းကြပ်လာတယ် ဒါကြောင့် တစ်ချို့ မြန်မာတွေက မျိုးချစ်မြန်မာတွေ ရဲ့လုပ်ရပ်ကို မြင့်မိုရ်တောင် ဇီးစေ့နဲ့ပေါက်တယ်လို့ ဘာတို့ပြောနေကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆို သူတို့ တွေလည်း ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အထိအခိုက်ရှိလာမှာကို ဆိုးကြောက်လို့လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ထင်မြင်ချက်ပါ မည်သူ့ကိုမှမရည်ရွယ်ပါ။
တစ်ခါမှတော့ မရေးဘူးပါဘူး ဒါပေမဲ့ စလုံးကို ချည်လာလို့ ထရေးတာပါ၊ ရေတောင် မထွက်တဲ့နိုင်ငံကို သေတောင်မလာပါဘူး၊ ကျတော် ကတော့နေနှင့်ဦးလို့ဘဲ ကြိမ်းထားမယ်၊ ငါတို့ တိုင်းပြည် ကောင်းစားမှ စလုံးက နွားတွေကို ခိုင်းစားပြမယ်၊ ခေါင်းငုံခံတဲ့ အထဲမှာ မြန်မာ မပါဘူးဆိုတာ သိလောက်ပါပြီ၊ ကျေးဇူးမသိတဲ့ စလုံး။ သူများ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ လုပ်အားနဲ့ အသက်ဆက်နေတာများ ဒီကောင် ကျတော်တို့ တိုင်းပြည် သိပ်ဖွံ့ဖြိုး သွားမှာ အရမ်းကြောက်တယ်၊ အမေစု ဦးစီးတဲ့ ကျတော်တို့ တိုင်းပြည် တိုးတက်လာရင် စလုံးဆိုတာ ခွက်စွဲ ရမှာလေ.. အရှေ့တောင်အာရှမှာ စာရင်းတောင် ပျောက်သွားဦးမှာ နေနှင့်ဦးပေါ့ကွာ..
ဟုတ်တယ်ကိုပေါရေ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ရာကို လုပ်သူတွေ အလှံမလဲတိုက်သူတွေအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် အခွင့်အရေးဆိုတာ တိုက်ယူမှရတယ် ဆိုတာ မြန်မာတွေရဲရဲကြီးသဘောပေါက်ဖို့ လိုနေပြီ
နင်တို့ လို အကောင်တွေ နှင်ထုတ်ခံရတာတောင် နဲသေးတယ်....
အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့... (အမည်မသိ) ခင်ဗျာ။
နင်တို့လို အကောင်တွေ နှင်ထုတ်ခံရတာ နည်းတောင် နည်းသေးတယ်လို့တော့ မပြောသင့်ပါဘူးဗျာ။
ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ်သွားတဲ့ အတွက် အပြစ်တင်စရာ မရှိပါဘူး။ အမြင်မတူတိုင်း ရန်သူ မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ် မလုပ်ချင်ရင် မလုပ်ပါနဲ့။ မလုပ်နိုင်ရင် မလုပ်ပါနဲ့။ ဒါပေမယ့် ဘေးထိုင်ပြီး ဘုပြောနေရင် အတော်လေးကို ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ် လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ရဲရင့် ပြတ်သားမှု ကို လွန်စွာဂုဏ်ယူကြောင်းပါခင်ဗျား..
ကြောက်အောင် ခြောက်မယ်၊ ခြောက်လို့မကြောက်ရင် ညစ်မယ်၊ ညစ်ရုံနဲ့မရရင် ထပ်ပြီးကောက်ကျစ်ကြပါဦးမယ်။ ဒီတော့ ရှေ့ဆက်ပြီး သတိကြီးစွာနဲ့ ဆက်လှုပ်ရျားကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
From လူသတ်သမားရဲ့ ညစာ by နှင်းခါးမိုး.
ပိုက်ဆံလေးချမ်းသာလာတော့နိင်ငံတကာမှာဝင်ဆံ့ချင်တယ်၊ဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်ကယုတ်ပတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်။သူတို့ကြောက်တာကသူတို့ယုတ်တာကိုPublicize အလုပ်ခံရမှာသိပ်ကြောက်တယ်၊Singapore နှင့်Japan ဟာတူတူဘဲ။
ကျေးဇူးပြီး စင်ကာပူ မှာ ဆန်ဒပြပွဲ ရှိလာလျှင် ဒီ blog မှာဖော်ပြပေးပါနော်။ Thanksalot.
အမြင်မတူတိုင်း ရန်သူ လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ နားတွေကလော၊ မျက်စေ့တွေနောက် လွန်းလို့ ပါ။
စလုံး မကောင်းကြောင်းတွေ ဒီလောက် ပြောနေကြလွန်းသူတွေ သူတို့ ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲဆိုတာ သူတို့ မိတ်ဆွေတွေ တော်တော်များများက သိနေကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရရေးလား ဟိုကိုသွားရရေးလား... သိနေကြတယ်နော်...။
ကျုပ်တို့ကတော့ စလုံး မကောင်းကြောင်းလည်းပြောတယ်၊ ဟိုဟို ဒီဒီ လည်း သွားဖို့လည်း စိတ်ကူးဖို့တောင် မတွေးမိဘူး။ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် အမိနိုင်ငံက ထွက်လာရတဲ့ ဗမာ (တရုပ်၊ မွန်၊ ရှမ်း အဆက်တော့ ပါတယ်)။ မကောင်းတာကို အကောင်းလုပ်မပြောနိုင်ပေါင်။
အမည်မသိ ... သို့
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ မြန်မာ့အရေးကို လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သူတွေ အများစုဟာ PR ၊ EP & S Pass ဖြစ်ကြပြီး WP တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ အလုပ်၊ လုပ်ရတဲ့ အနေအထားအရ အချိန်တိုင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု မလုပ်နိုင်တာကြောင့် အရေအတွက် နည်းပါးသော်လည်း မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်တာကို Referendum အပါအ၀င် လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ကောင်းကောင်း ပြသခဲ့ကြပါတယ်။
PR ၊ EP & S Pass တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်း၊ ပညာအဆင့်အတန်းတို့ကြောင့် ရလာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ခြားနိုင်ငံကို သွားချင်ရင် ဒီကနေ ပိုက်ဆံ အတော်အတင့် သုံးနိုင်ရင် တရားဝင် သွားလို့ ရပါတယ်။
အမည်မသိ ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ သွားစရာ မလိုပါ။ အထူးသဖြင့် PR သမားတွေဆိုရင် ဒီမှာ ၄၊ ၅နှစ် နဲ့ အထက် နေထိုင်လာကြသူတွေချည်းပါပဲ။ အဲ့ဒီလို တစ်ခြားနိုင်ငံ သွားချင်ရင် Singapore Citizen ခံပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ PR အနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သက်ဆိုင်ရာ ပညာအရည်အချင်း၊ လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံအရ အဆင့်အတန်း ရှိရှိ သွားလို့ရနိုင်တာကို နားလည် သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်။
မိမိစိတ်ကို မိမိ အားမနာတမ်း မေးမြန်းကြည့်ပါ။ ဘယ်ဆီနေမှန်းမသိနဲ့ အခွင့်ထူးကြီး (အမည်မသိ ခံယူထားတယ်လို့ ယူဆထားရတဲ့) ကို မျှော်မှန်းပြီး လောလောဆယ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေ၊ လွပ်လပ်မှုတွေ၊ ကိုယ့်အိတ်ထဲက ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ငွေကြေးတွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ လုံခြုံမှုတွေကို ရင်းနှီးပြီး မျိုးချစ်စိတ် အတုအယောင်လေးနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မလားလို့။
အဲ့ဒီတော့ ကိုယ်မသိနားမလည်ပဲနဲ့ ထင်ရာလျှောက်ပြောနေခြင်းဟာ ဘယ်လိုမှ သင့်တော် လျှော်ကန်ခြင်း မရှိပါဘူး။ အရာရာကို ဆင်ခြင်တိုင်းထွာနိုင်ဖို့ မိမိကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက်လေ့လာ လုပ်ကိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
"အမြင်မတူတိုင်း ရန်သူ လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ နားတွေကလော၊ မျက်စေ့တွေနောက် လွန်းလို့ ပါ။
စလုံး မကောင်းကြောင်းတွေ ဒီလောက် ပြောနေကြလွန်းသူတွေ သူတို့ ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲဆိုတာ သူတို့ မိတ်ဆွေတွေ တော်တော်များများက သိနေကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရရေးလား ဟိုကိုသွားရရေးလား...
I mind you.... be carful with your words ! if you know well about their education level and their professions, I believe you won't be accusing them in suchaway. They are already out of Burma and haveagood status in Singapore.There's nothing to worry for them to go to other countries with their professional skills and education.
Burmese in SG
စ လုံး အစိုးရက Speaker Corner မှာ တရားဝင် ဆန္ဒပြခွင်.ပြူ ရတဲ. အထိ ဖြစ်လာတာဟာ...ဘာကြောင်.လဲဆိုတာ....စဉ်းစားကြည်.ကြပါ......
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စင်္ကာပူ နိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ မျိူးစေ.ကို မျိူးချစ် မြန်မာတွေက ချပေးလိုက်တယ်လို. ပြောခင်ပါတယ်....
မြန်မာပြည်အတွက်လဲ ဆက်လက်ပြီး ညီညီ ညွတ်ညွတ်နဲ. တိုက်ပွဲ ၀င်ကြပါ။။
ရန်သူကို ရန်သူလို သဘောထားကြပါ။လျှော.မတွက်ကြပါနဲ.။မယုံစားကြပါနဲ.။။။
(အများအားဖြင့်)အတ္တကြီးမားလွန်းလှသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကိုယ်ကျိုးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွက်စွန့်လွှတ်ထားသော မျိုးချစ်မြန်မာများရဲ့  ခံယူချက်နဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် (မည်သူမည်မျှပုတ်ခတ်ကြသည်ဖြစ်စေ)များစွာ ဂုဏ်ယူလေးစားမိပါသည်.